Muturikiri, muturikiri wemitauro makumi mashanu neshanu kwenguva pfupi | IPhone nhau
Semutemo wakajairika, kana tikataura nezvevashanduri zvekushandisa, vazhinji vedu tinogara tichifunga nezveGoogle Mushanduri, muturikiri par kugona iro rinowanikwawo kurodha pasi uye kushandisa zvachose mahara. Kunyangwe izvi, muApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti tishandure zvinyorwa nekukurumidza uye nyore. Muturikiri weGoogle anonyanya kushandiswa kuturikira mazwi mamwe chete, kunyangwe ichikwanisawo kushanda nemagwaro asi mhedzisiro iyo yaisingapi padanho rekusangana inosiya zvakanyanya kudiwa, zvinofanirwa kutaurwa, kunyangwe Google iri kumashure kwayo. Muturikiri anotibvumidza kuti tishandure zvinyorwa pakati pemitauro makumi mashanu nemasere ine chinongedzo chinoshanda uye parizvino inowanikwa kurodha mahara. Mutengo waro wenguva dzose ndeye 5,99 euros.
Imwe yemabhenefiti yatinopihwa nemushanduri, zvichienzaniswa neyeGoogle, ndiwo maratidziro akagadzirirwa kududzira zvinyorwa, kwete izwi rimwe chete. Nedudziro hazvidi kuti unyore kana kunama iwo mavara, kunyange zvichikwanisika, asi isu tinogona raira kunyorera rugwaro rwatinoda kushandura kuitira kuti izvigamuchire uye rishandure. Inokurumidza uye yakapusa nzira yekutaurirana nevamwe vanhu vasingataure mutauro mumwe chete.
Kana tangodudzira iwo mavara, tinogona kuagovera kuburikidza nesocial network, neemail kana nemeseji. Uye zvakare, zvinotibvumidzawo kuteedzera iwo mavara kuti unamate gare gare mune mamwe maapplication Pakati pemitauro makumi mashanu neshanu inotsigirwa nechishandiso ichi tinowana ChiArabic, chiBulgaria, chiChinese, Chinyakare Chinese, Danish, Dutch, Chirungu, French, German, Greek, Icelandic, Irish, Italian, Japanese, Korean, Ndapota, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish. ChiSwedish, Thai, Turkish, Welsh, Armenian, Latin ...
Muturikiri inoenderana neIOS 8 zvichienda mberi uye inowirirana chete neiyo iPhone Sezvo ichida kubatana kweinternet kushandura zvinyorwa, zvakare inoshandisa mashandisiro ezvinodhudhudhu midhudhudhu kubva kuNuance, kambani yanga iri mumusika kwemakore mazhinji kududzira mazwi mukunyora.
Dudziro Muturikiri !!10,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Muturikiri, muturikiri wemitauro makumi mashanu nemasere kwenguva yakati rebei
Muturikiri wechiSpanish wechiSpanish akadaro
Ini ndangozviedza uye zviri kufamba mushe, maita neruzivo
Pindura muturikiri wechiSpanish wechiSpanish
iOS 10.3 inogona kuuya nekhibhodi inoyerera yeiyo iPad